कांग्रेस — donnews.com
‘कांग्रेसमा उत्साह, एकता, रुपान्तरण, सफल बनाऔँ १४औँ महाधिवेशन’
काठमाडौँ, २२ भदौ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आसन्न १४औँ महाधिवेशन प्रचारात्मक नारा तय गरेको छ । पार्टीको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको बैठकले महाधिवेशनका लागि ‘कांग्रेसमा उत्साह, एकता, रुपान्तरण सफल […]
काठमाडौँ, १८ भदौ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत आजदेखि गाउँ/नगर वडा अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ । हालसम्म क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भइसकेका ५६ जिल्लाका वडामा अधिवेशन आरम्भ हुने कांग्रेसको केन्द्रीय […]
युवा उद्यमी सिरोजविजय कोइरालाको कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा उमेद्वारी
पोखरा, १७ भदौं । नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा उद्यमी सिरोजविजय कोइरालाले १४ औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ इकाई समितिबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । […]
शुक्रबारदेखि ५६ जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन प्रारम्भ
भीष्मराज ओझा काठमाडौँ, १७ भदौ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबारदेखि गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ । हालसम्म क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशित भइसकेका ५६ जिल्लाका वडामा यही भदौ १८ […]
कांग्रेसमा प्रवेश गरेका गणेश भट्टराईसहितलाई शुभकामना
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका पोखराका अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईसहित युवालाई शुभकामना दिएका छन् । बुधबार निवासमै आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिपीको […]
बागलुङ, १७ भदौ । पार्टी केन्द्रले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन हुनुपर्नेमा यहाँ भने केहीदिन पछिलाई धकेलिएको छ । यही भदौ २१ गते सोमबार जिल्लाका ८५ वटै वडामा […]
अच्युत रेग्मी काठमाडौँ, १५ भदौ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन नजिकिएसँगै महाधिवेशनमा भाग लिन राजधानी छाडेर गाउँ जाने नेता तथा कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढेको छ […]
कांग्रेस महाधिवेशनका विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति
काठमाडौँ, १२ भदौ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन निर्देशिकालगायत विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच […]
काठमाडौँ, ११ भदौ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको आसन्न १४ औँ महाधिवेशनका लागि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुभएको छ । उहाँले नेता कार्यकर्तासँग […]
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला सभापतिको रिले अनशन
काठमाडौँ, १० भदौ । क्रियाशील सदस्यको सम्पूर्ण सूची तत्काल सार्वजनिक गनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सुरु भएको नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापतिको रिले अनशन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी रहेको छ । काँग्रेसका […]
वासुदेव पौडेल पोखरा, १० भदौ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औँ महधिवेशन नजिकिएसँगै समाजका विभिन्न तह र तप्कामा पार्टीको आगामी नेतृत्व कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले ठाउँ लिन थालेको छ […]